Isikhululo sefowuni esitsha seMotorola: Ukusasazwa kweMidlalo yeSonic Boost 210 | Iindaba zeGajethi
IMotorola yongeza ii-headphone ezintsha kunye nezithethi: Ukusasaza iMidlalo kunye neSonic Boost 210
UJordi Gimenez | | Izithethi
Zizinto ezitsha zeemveliso kwabo bathanda ukumamela umculo kuyo yonke indawo, nokuba kukuzilolonga ngaphandle, ejimini okanye ekuhambeni. Kwaye sijongane nayo ii-headphone ezintsha kunye nesithethi esiphathwayo esivela kwi-Motorola.
Kule meko zii-headphone Ukusasazwa kweMidlalo ye-Motorola kunye nesithethi esiphathwayo I-Motorola Sonic Boost 210. Zimbini iimveliso ezifikelelekayo ngokwamaxabiso kwaye singatsho ukuba uyilo lwazo lutsha kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iimodeli esinokuzifumana kwimarike.
1 Izixhobo ezitsha ziyahambelana noSiri, Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
2 I-Motorola Sonic Boost 210 incinci, ilula kwaye ayibizi
Izixhobo ezitsha ziyahambelana noSiri, Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
Ezi zizixhobo ezihambelana nabancedisi abakhoyo ngoku kwaye oku kunomdla kumsebenzisi kuba kusivumela ukuba silawule umculo ngaphandle kokuchukumisa izixhobo, ngokuvakalayo. Kwimeko yee-headphone Ukusasazwa kweMidlalo yeMotorola, Singatsho ukuba bubungakanani obuncinci bokwenyani obungenazingcingo zeBluetooth 4.1 ezineehaksi ezibini zokubopha ukuze zingawi ngelixa siqhuba imidlalo esiyithandayo.
Umdlalo woSasazo udibanisa inkqubo ye-DSP ukunciphisa ingxolo kunye nokucinywa kwe-echo, Nikezela ngokuzimela ngokwenkampani ngokwayo malunga neeyure ezi-2 eziba ziiyure ezi-4 enkosi kwimeko yothutho eyongeza ibhetri yokutshaja. Abachasene namanzi kunye nokubila kwaye banemakrofoni yokufumana okanye yokwenza iifowuni ukongeza ekubheneni abancedisi belizwi uSiri, u-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle. Ezi Motorola Stream Sport ziyafumaneka ngexabiso le- 99,99 euro.
I-Motorola Sonic Boost 210 incinci, ilula kwaye ayibizi
Yiyo Isandisi-lizwi esimalunga ne-122 g kwaye sincinci ngobukhulu ukwazi ukuhambisa naphi na ngokulula. Yongeza itekhnoloji ye-Bluetooth 4.1 kwaye ibandakanya imakrofoni eyakhelweyo ekuvumela ukuba ukonwabele abancedisi belizwi abakhoyo ngoku kunye neefowuni, i-Siri, i-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle.
Kule meko, i-Sonic Boost 210 iyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo: mhlophe, mnyama kwaye bomvu. Ngokumalunga nexabiso, sithetha ngezinye 24,99 euro ke zitshiphu ngenene ukukhuphisana nentengiso enkulu yezixhobo.
Zombini ziphantsi kwesambrela seBinatone. I-Binatone inelayisensi yi-Motorola ngokwayo yezixhobo zomsindo nezasekhaya. Ngenye yeenkampani eziphambili zombane zabathengi abaneminyaka engaphezu kwama-60 yamava okwenza iimveliso zabathengi. Iphuhlisa kwaye ivelise iimveliso zamazwe angama-55 kwihlabathi liphela ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Izithethi » IMotorola yongeza ii-headphone ezintsha kunye nezithethi: Ukusasaza iMidlalo kunye neSonic Boost 210
I-Spaceball Zerogravity, itekhnoloji edlalwa nguJugetrónica
Indlela yokukhuphela kunye nokuncamathisela kwi-Mac